Home Wararka Wasiir BB Iyo Miisaaniyadda Hortaalla Xildhibaanada maxaa ka run ah?
Wasiir BB Iyo Miisaaniyadda Hortaalla Xildhibaanada maxaa ka run ah?
Waxa barlamanka horyaalla miisaaniyad sannadeedkii dalka iyadoo kuwii hore la xerin, waana musibo runtii ay dowladdaan la timid. Haddaba waxaa n halkaan ku eegeynaa lacagaha magac somaliya lagusoo qaaday 2017, 2018, iyo 2019 gaar ahaan kuwa loo soo qaaday dhinaca bani-aadaminimo sida abaaraha iyo Fatahaadaha oo aan og nahay dhibaatooyinka ay hadda nagu hayaan. Waxaana la soconnaan shacbiga kumi kumi iyo taano taano isaga ururinyaa taageero dadkii ku dhibaatooday fatahaadaha iyadoo lacag ka badan $2.73 Bilyan oo aan la ogeyn meel ay ku baxday, kana muuqan miisaaniyadda dowladda.
Sidoo kale dhinaca horumarinta ayaa waxaa lagu soo qaaday lacag dhan $2.38Bilyan tan oo loogu talagalay in lagu fuliyo mashaariic horumarineed sida Jidada, Cisbitaallo, xaruumo warbarsho iyo kabista kaabayaasha dhaqaalaha dalka, hasa yeehsee lama oga meel ay ka baxday iyo meel ay ka muuqato.
Lacagtaan waa qofkastaa oo Somali ah uu mas’uul ka yahay , mana wax laga beenshegayo ee waxaa hakaan ku muujisan dal waliba ama hay’ad walba intiiay na siisay. Miisaaniyadda uu Wasiir BB la oradyaana $274 Milyan oo kaliya tan ah canshuurta Xamar xoogga looga qaaday ee ay madaxdu kau safarto guryana kaga iibsato dibadaha iyo Hargeysa sida Beyle, Kheyre, iyo Farmajo.
Lacagta 2017 ilaa 2019 SOmaliya la siiyey ee shaxdaan hoose ka muqataa isugeyn teedu waa $5.01B bal haddaba yaa sheegi kara halka ay lacagtaan aado iyo cidda ay ku maqan tahay. Haddiisa ay hay’adaha caalamiga ah iyaga ku shaqeystaan miyeysan ahayn in dowladda ay dabagasho warbixinna ka soo saarto oo aysan iska amusing marka iyaga jeebka xoogaa af dhabaandhow ah loogu shubo.
Halkaan ka eeg ladan shax oo is barbar yaalla, kadibna adigu isku darso noona soo sheeg halka xildhibaan ay kaga muuqato miisaaniyadda dalka oo hortaada taalla maanta. Misa wali waad Fahmi la’dahay masuuliyadaad oo qeylida Wasiir Khadija ayaa ku indhasarcaadisay?
Wasiirka BB waxaa uu mar waliba isticmaalaa erayga DEYN CAFIS, mana aha run ee waa deyn fududey -Debt Relief-, Tan pp macnaheedu yahay inay dowlado dano gaar ah ka leh Somaliya sida Norway iyo Qatar ay naga bixiyaan dulsaarkii deymahii hore si ay aorta noon geliyaan demo hor leh oo intii hore ka weyn, kana khatersan.
Sides darteed Barlamaanku ha ogaden inaysan deyn cafés Kirin ee ay tahay deyn fududeyn -Debt releif.
Haddaba Wasiir BB wuxuu sheegayaa in haddii deymaha nagala cafiyo inaan heli doono $700 malyan oo deyn ah oo lagu hirgelinayo mashaariic. Haddaba su’aasha waxaa tahay lacagtaas sow Ma Mari doontoo meeshii ay $5 bilyan hoose ay mareen oo aan waxba lagu qaban deyna ay nagu tahay. Ogow Xildhibaan lacagtaas $5.01 deyn naguma aha haddii ay sida hadda ku timaado, laakiin haddii deyn lagu soo qaaqd waa deyn dulsaar wadata oo adiga Iyo ilmahaaga aad u qoolan tihiin.
Xildhibaan maant qalinkaaga ugu hiilli cunuggaaga oo su’aalo ka weydii meeshii uu marsiiyey lacagahan wasiir Beyle Beenaale, guddina soo baarana u saar.